သင့်ချစ်သူမှာ ဒီလိုအချက်လေးတွေရှိနေရင် သင်က ချစ်သူရကံကောင်းတာပါပဲ ❤️ – Trend.com.mm
ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ဆိုတာ ကိုယ့်ချစ်သူမိန်းကလေးအတွက်ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေအမြဲဖန်တီးပေးနေတာထက် ဒီလိုအချက်တွေအမြဲလုပ်ပေးနေသူပါ။ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေဖန်တီးပေးမှ အချစ်စစ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးနော်။တကယ့်ချစ်သူကောင်းယောက်ျားလေးဆိုတာ သင့်ကို အမြဲ
ဘုရင်မတစ်ပါးလိုမော်ကြွားနေနိုင်အောင်၊ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေနိုင်အောင်၊ချစ်သူမိန်းကလေးရဲ့အိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင် အနားကနေကူညီဖြည့်ဆည်းပေးနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ချစ်သူက ရိုမန်တစ်ဆန်တတ်တဲ့ယောက်ျားလေးမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်၊ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေအမြဲဖန်တီးမပေးရင်တောင် ဒါတွေအမြဲလုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်ဆိုရင်သူက တကယ့်ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါ။
သင်က ငွေကြေးမစုဆောင်းပဲ ဟိုဟာလေးဝယ်ချင်၊ဒီဟာလေးဝယ်ချင်ဖြစ်နေရင်တောင် သူက သင့်ရဲ့ငွေတွေကို ထိန်းသိမ်းစုဆောင်းတတ်အောင်အမြဲပြောလေ့ရှိတယ်။အကြွေးတွေလည်းမထားဖို့၊လိုချင်ရုံသက်သက်ပဲလား။တကယ်လိုအပ်တာလား ခွဲခြားသိနိုင်ဖို့ အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုအမြဲဆုံးမပေးတတ်တယ်။ပွစိပွစိနဲ့ပေါ့ 😜
ချစ်သူတင်မက အစ်ကိုတစ်ယောက်လိုအားကိုးလို့ရပြီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်လို တိုင်ပင်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ရထားတာပါပဲ။သူက သင်မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်အောင်၊မလုပ်သင့်တာမလုပ်မိအောင် လေပြည်လေးနဲ့နားဝင်လာအောင်ရှင်းပြပြောပြတတ်တဲ့အတွက် သူက ချစ်သူတစ်ယောက်ထက်အစ်ကိုတစ်ယောက်နဲ့တောင်ပိုတူနေပါသေးတယ်။
မိန်းကလေးဆိုတာစကားများမယ်။ချွဲမယ်၊စိတ်ကောက်မယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်!့ သင်ဘယ်လောက်ပဲစကားများများ သင်ပြောတာတွေကိုလည်းသူကမညည်းမညူနားထောင်ပေးတယ်။သင့်ရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုလည်းသူက နားထောင်ပေးမယ်။အကြံပေးစရာရှိပေးမယ်။သင်ဖြစ်ချင်တဲ့အိပ်မက်တွေ
ဖြစ်အောင်လည်းအကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးမယ်။အိပ်မက်က ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဆိုပြီးအထင်သေးတာမျိုး၊လျစ်လျူရှုလိုက်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။တစ်ခါတစ်လေအကြံပေးတာထက် ကိုယ်ပြောသမျှကိုနားထောင်ပေးတတ်တာကလည်း ချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ရထားခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ။
ဥပမာကိုယ်က ချောကလက်ကြိုက်တယ်၊သူ့ကို ချောကလက်ဝယ်လာခိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ ချောကလက်အပြင်ကိုယ်ကြိုက်တတ်တဲ့မုန့်လေးတွေ၊ချောကလက်ကိုမှအမျိုးအစားမတူတာလေးတွေဝယ်လာပေးတတ်တာမျိုး၊ကိုယ်ဘာလိုလဲဆိုတာကို ကိုယ်မပြောရပဲသိတဲ့ချစ်သူကောင်းတစ်ယောကသင်ရထားပြီလား?
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်မပါလည်း ကိုယ့်မိဘတွေနဲ့သီးသန့်တွေ့ဆုံစကားပြောတာမျိုး၊ခရီးအတူတူထွက်ရင်း သူကိုယ့်အပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာစစ်မှန်ကြောင်းမိဘတွေနားလည်လက်ခံလာအောင်ကြိုးစားတာမျိုးပေါ့။မိဘဆိုတာသားသမီးတိုင်းကို ကလေးလေးတွေလို့ပဲမြင်ကြတာပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရင်ခွင်ထဲကဆွဲထုတ်သွားမယ့်သူကို အလွယ်တကူကြည်ဖြူနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကိုသင့်ချစ်သူကလည်းနားလည်ပြီး သူတို့သဘောတူလာတဲ့အထိ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပြုမူသွားတာမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုချစ်သူမျိုးက ရိုမန်တစ်ဆန်တာတွေဖန်တီးပေးတာထက်ပိုပြီးမြတ်နိုးအားကိုးဖို့ကောင်းပါတယ်နော်။
သင့်ချစ်သူက မရိုတတ်ပေမဲ့ ဒီလိုအချက်လေးတွေနဲ့ပြည့်စုံနေရင် သူက တကယ့်ကိုချစ်သူကောင်းတစ်ယောက်ပါပဲနော်။အဲ့ဒါကြောင့်သင့်ချစ်သူက ရိုမန်တစ်မဆန်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တာတွေလျှော့ပြီး သူ့အပေါ်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားချစ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ ❤
ခဈြသူကောငျးတဈယောကျဆိုတာ ကိုယျ့ခဈြသူမိနျးကလေးအတှကျရိုမနျတဈဆနျတာတှအေမွဲဖနျတီးပေးနတောထကျ ဒီလိုအခကျြတှအေမွဲလုပျပေးနသေူပါ။ရိုမနျတဈဆနျတာတှဖေနျတီးပေးမှ အခဈြစဈတာမြိုးမဟုတျပါဘူးနျော။တကယျ့ခဈြသူကောငျးယောကျြားလေးဆိုတာ သငျ့ကို အမွဲ
ဘုရငျမတဈပါးလိုမျောကွှားနနေိုငျအောငျ၊ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျမှုအပွညျ့ရှိနနေိုငျအောငျ၊ခဈြသူမိနျးကလေးရဲ့အိပျမကျတှကေို အကောငျအထညျဖျောနိုငျအောငျ အနားကနကေူညီဖွညျ့ဆညျးပေးနသေူတှဖွေဈပါတယျ။
သငျ့ခဈြသူက ရိုမနျတဈဆနျတတျတဲ့ယောကျြားလေးမြိုးမဟုတျရငျတောငျ၊ရိုမနျတဈဆနျတာတှအေမွဲဖနျတီးမပေးရငျတောငျ ဒါတှအေမွဲလုပျပေးလရှေိ့တယျဆိုရငျသူက တကယျ့ခဈြသူကောငျးတဈယောကျလို့ပဲမှတျလိုကျပါ။
သငျက ငှကွေေးမစုဆောငျးပဲ ဟိုဟာလေးဝယျခငျြ၊ဒီဟာလေးဝယျခငျြဖွဈနရေငျတောငျ သူက သငျ့ရဲ့ငှတှေကေို ထိနျးသိမျးစုဆောငျးတတျအောငျအမွဲပွောလရှေိ့တယျ။အကွှေးတှလေညျးမထားဖို့၊လိုခငျြရုံသကျသကျပဲလား။တကယျလိုအပျတာလား ခှဲခွားသိနိုငျဖို့ အဈကိုတဈယောကျလိုအမွဲဆုံးမပေးတတျတယျ။
ခဈြသူတငျမက အဈကိုတဈယောကျလိုအားကိုးလို့ရပွီးသူငယျခငျြးတဈယောကျလို တိုငျပငျလို့ရတယျဆိုရငျတော့ သငျကခဈြသူကောငျးတဈယောကျရထားတာပါပဲ။သူက သငျမဖွဈသငျ့တာမဖွဈအောငျ၊မလုပျသငျ့တာမလုပျမိအောငျ လပွေညျလေးနဲ့နားဝငျလာအောငျရှငျးပွပွောပွတတျတဲ့အတှကျ သူက ခဈြသူတဈယောကျထကျအဈကိုတဈယောကျနဲ့တောငျပိုတူနပေါသေးတယျ။
မိနျးကလေးဆိုတာစကားမြားမယျ။ခြှဲမယျ၊စိတျကောကျမယျ ဟုတျတယျဟုတျ!့ သငျဘယျလောကျပဲစကားမြားမြား သငျပွောတာတှကေိုလညျးသူကမညညျးမညူနားထောငျပေးတယျ။သငျ့ရဲ့စိတျကူးတှကေိုလညျးသူက နားထောငျပေးမယျ။အကွံပေးစရာရှိပေးမယျ။သငျဖွဈခငျြတဲ့အိပျမကျတှေ
ဖွဈအောငျလညျးအကောငျးဆုံးပံ့ပိုးပေးမယျ။အိပျမကျက ကွီးကွီးကယျြကယျြဆိုပွီးအထငျသေးတာမြိုး၊လဈြလြူရှုလိုကျတာမြိုးလညျးမရှိဘူး။တဈခါတဈလအေကွံပေးတာထကျ ကိုယျပွောသမြှကိုနားထောငျပေးတတျတာကလညျး ခဈြသူကောငျးတဈယောကျရထားခွငျးရဲ့အကြိုးကြေးဇူးပါပဲ။
ဥပမာကိုယျက ခြောကလကျကွိုကျတယျ၊သူ့ကို ခြောကလကျဝယျလာခိုငျးလိုကျတယျ။ဒါပမေဲ့ ခြောကလကျအပွငျကိုယျကွိုကျတတျတဲ့မုနျ့လေးတှေ၊ခြောကလကျကိုမှအမြိုးအစားမတူတာလေးတှဝေယျလာပေးတတျတာမြိုး၊ကိုယျဘာလိုလဲဆိုတာကို ကိုယျမပွောရပဲသိတဲ့ခဈြသူကောငျးတဈယောကသငျရထားပွီလား?
တဈခါတဈလေ ကိုယျမပါလညျး ကိုယျ့မိဘတှနေဲ့သီးသနျ့တှဆေုံ့စကားပွောတာမြိုး၊ခရီးအတူတူထှကျရငျး သူကိုယျ့အပျေါထားတဲ့မတ်ေတာစဈမှနျကွောငျးမိဘတှနေားလညျလကျခံလာအောငျကွိုးစားတာမြိုးပေါ့။မိဘဆိုတာသားသမီးတိုငျးကို ကလေးလေးတှလေို့ပဲမွငျကွတာပါ။အဲ့ဒါကွောငျ့သူတို့ရငျခှငျထဲကဆှဲထုတျသှားမယျ့သူကို အလှယျတကူကွညျဖွူနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ဒါကိုသငျ့ခဈြသူကလညျးနားလညျပွီး သူတို့သဘောတူလာတဲ့အထိ လူကွီးလူကောငျးဆနျဆနျပွုမူသှားတာမြိုးပေါ့။အဲ့ဒီလိုခဈြသူမြိုးက ရိုမနျတဈဆနျတာတှဖေနျတီးပေးတာထကျပိုပွီးမွတျနိုးအားကိုးဖို့ကောငျးပါတယျနျော။
သငျ့ခဈြသူက မရိုတတျပမေဲ့ ဒီလိုအခကျြလေးတှနေဲ့ပွညျ့စုံနရေငျ သူက တကယျ့ကိုခဈြသူကောငျးတဈယောကျပါပဲနျော။အဲ့ဒါကွောငျ့သငျ့ခဈြသူက ရိုမနျတဈမဆနျဘူးဆိုပွီးစိတျဆိုးစိတျကောကျတာတှလြှေော့ပွီး သူ့အပျေါပိုပွီးတနျဖိုးထားခဈြပေးဖို့မမပေ့ါနဲ့